The Lighthouse (2019) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားလေးထဲမှာတော့ နာမညျကွီးသရုပျဆောငျဖွဈတဲ့ ရောဘတျပတျတီဆနျ (Twilight ထဲကမငျးသား) နဲ့ မငျးသားကွီး ဝီလီယံဒတျဖို (Spiderman 2002 ထဲဗီလိနျမငျးသားကွီး) နှဈယောကျတညျးသာလြှငျ တဈကားလုံးမှာ သရုပျဆောငျထားတာတှရေ့မှာပါ
မငျသားနှဈယောကျတညျးနဲ့တငျ တဈကားလုံးကိုတဖွညျးဖွညျးနဲ့ဆှဲဆောငျထားတာပါ ဒီဇာတျကားကိုကွညျ့ပွီးရငျတော့ ခေါငျးထဲမှာအတှေးတှတေဈသီခညျြးကနျြခဲ့စမေယျ့ဇာတျကားမြိုးပါ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ၁၉ရာစု New England ကမျးရိုးတနျးကမီးပွတိုကျတဈခုမှာအခွတေညျရိုကျထားပါတယျ
အီဖရနျဝငျးစလို လူငယျလေးတဈယောကျဟာ သောမတျဈဝိတျဒျ ဆိုတဲ့ မီးပွတိုကျစောငျ့ရှောကျသူအဖိုးကွီးရဲ့လကျအောကျမှာ လေးပတျလောကျအလုပျလုပျဖို့တာဝနျကလြာပါတယျ စစရောကျခငျြးနမှောပဲ သူ့အိပျရာထဲကနေ ရသေူမအရုပျလေးတဈရုပျကိုတှခေဲ့ပွီးသိမျးထားခဲ့ပါတယျ
အီဖရနျ သူတို့နထေိုငျတဲ့နရောအတှကျ အလုံးစုံအကုနျလုံးကိုလုပျရပါတယျ သောမတျဈဝိဒျကတော့ညဖကျ မီးပွတိုကျရဲ့ထိပျဆုံးအပျေါထပျမှာပဲအလုပျလုပျပါတယျ နဖေ့ကျတှအေလုပျလုပျပွီး ညဖကျဆိုအီဖရနျရဲ့အတှေးတှကေ ကယောကျခွောကျခွားဖွဈတယျ တှေးမိတှေးရာတှလြှေောကျတှေး ဖွဈတာမြားတယျ
တဈနညေ့ဖကျ ညစာစားခဲ့တဲ့အခါ အီဖရနျဟာ လမျးညှနျစာအုပျမှာက အလုပျကိုအလှညျ့ကလြုပျရမယျလို့ရေးထားတယျအဲ့ဒါကွောငျ့သူလဲ မီးပွတိုကျအပျေါဆုံးမီးအိမျကွီးရှိတဲ့နရောမှာအလုပျလုပျခငျြတယျလို့ပွောပါတယျ ဒါပမေယျ့ သောမတျဈကလကျမခံပါဘူး သူတဈဦးတညျးသာလြှငျအဲ့အလုပျလုပျမယျဘယျသူမှလုပျလို့မရဘူးဆိုပွီးငွငျးခဲ့ပါတယျ
အီဖရနျလညျး စီနီယာအထကျလူကွီးဖွဈနအေတှကျကွောငျ့ ပထမအကွိမျလကျလြှော့ခဲ့ပါတယျ ညစာစားနရေငျးနဲ့သောမတျဈကအီဖရနျကို ဒီနရောမှာရှိတဲ့အယူအဆတဈခြို့ကိုပွောပွခဲ့ပါတယျ ပငျလယျဇငျရျောငှကျတှကေိုမသတျရဘူး သတျရငျဒုက်ခရောကျမယျဆိုတာတှအေခွားအရာတှရေောပေါ့
ဒီလိုနဲ့ သောကျရငျး စားရငျးနလောလိုကျတာ တဈနတေ့ော့ အီဖရနျတို့သောကျနတေဲ့ရကေနျထဲကိုဇငျရျောငှကျတဈကောငျကပြွီးသနေပေါတယျအီဖရနျဟာ ဒေါသထှကျပွီး အနားမှာရှိတဲ့ ဇငျရျောငှကျတဈကောငျကို စိတျလိုကျမနျပါသတျလိုကျပါတော့တယျ….
အဲ့ဒီနောကျဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….အညှနျးက ရှညျလို့ စပှိုငျလာလို့မထငျလိုကျပါနဲ့နောကျပိုငျးဆကျဖွဈတဲ့ဟာတှကေ တကယျ့ကိုအဆနျးကွီးတှပေဲမို့ပါ…
ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ရောဘတ်ပတ်တီဆန် (Twilight ထဲကမင်းသား) နဲ့ မင်းသားကြီး ဝီလီယံဒတ်ဖို (Spiderman 2002 ထဲဗီလိန်မင်းသားကြီး) နှစ်ယောက်တည်းသာလျှင် တစ်ကားလုံးမှာ သရုပ်ဆောင်ထားတာတွေ့ရမှာပါ
မင်သားနှစ်ယောက်တည်းနဲ့တင် တစ်ကားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲဆောင်ထားတာပါ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီးရင်တော့ ခေါင်းထဲမှာအတွေးတွေတစ်သီချည်းကျန်ခဲ့စေမယ့်ဇာတ်ကားမျိုးပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉ရာစု New England ကမ်းရိုးတန်းကမီးပြတိုက်တစ်ခုမှာအခြေတည်ရိုက်ထားပါတယ်
အီဖရန်ဝင်းစလို လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ သောမတ်စ်ဝိတ်ဒ် ဆိုတဲ့ မီးပြတိုက်စောင့်ရှောက်သူအဖိုးကြီးရဲ့လက်အောက်မှာ လေးပတ်လောက်အလုပ်လုပ်ဖို့တာဝန်ကျလာပါတယ် စစရောက်ချင်းနေမှာပဲ သူ့အိပ်ရာထဲကနေ ရေသူမအရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်
အီဖရန် သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာအတွက် အလုံးစုံအကုန်လုံးကိုလုပ်ရပါတယ် သောမတ်စ်ဝိဒ်ကတော့ညဖက် မီးပြတိုက်ရဲ့ထိပ်ဆုံးအပေါ်ထပ်မှာပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ် နေ့ဖက်တွေအလုပ်လုပ်ပြီး ညဖက်ဆိုအီဖရန်ရဲ့အတွေးတွေက ကယောက်ခြောက်ခြားဖြစ်တယ် တွေးမိတွေးရာတွေလျှောက်တွေး ဖြစ်တာများတယ်
တစ်နေ့ညဖက် ညစာစားခဲ့တဲ့အခါ အီဖရန်ဟာ လမ်းညွှန်စာအုပ်မှာက အလုပ်ကိုအလှည့်ကျလုပ်ရမယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူလဲ မီးပြတိုက်အပေါ်ဆုံးမီးအိမ်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ် ဒါပေမယ့် သောမတ်စ်ကလက်မခံပါဘူး သူတစ်ဦးတည်းသာလျှင်အဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးငြင်းခဲ့ပါတယ်
အီဖရန်လည်း စီနီယာအထက်လူကြီးဖြစ်နေအတွက်ကြောင့် ပထမအကြိမ်လက်လျှော့ခဲ့ပါတယ် ညစာစားနေရင်းနဲ့သောမတ်စ်ကအီဖရန်ကို ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အယူအဆတစ်ချို့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ် ပင်လယ်ဇင်ရော်ငှက်တွေကိုမသတ်ရဘူး သတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာတွေအခြားအရာတွေရောပေါ့
ဒီလိုနဲ့ သောက်ရင်း စားရင်းနေလာလိုက်တာ တစ်နေ့တော့ အီဖရန်တို့သောက်နေတဲ့ရေကန်ထဲကိုဇင်ရော်ငှက်တစ်ကောင်ကျပြီးသေနေပါတယ်အီဖရန်ဟာ ဒေါသထွက်ပြီး အနားမှာရှိတဲ့ ဇင်ရော်ငှက်တစ်ကောင်ကို စိတ်လိုက်မန်ပါသတ်လိုက်ပါတော့တယ်….
အဲ့ဒီနောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….အညွှန်းက ရှည်လို့ စပွိုင်လာလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေက တကယ့်ကိုအဆန်းကြီးတွေပဲမို့ပါ…
The Good Doctor (Season 3) ၊အပိုငျး (၈)